अन्तर्राष्ट्रिय जागिर छोडि राजनीतिमा लागेका डा.सिद्धी अर्याल, यस कारण साझा पार्टी रोजे (भिडियो)
२५ असार २०७६, बुधबार १९:०३
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील विश्व परामर्शदातृ संस्था क्युइडि ग्रुपको एसिया क्षेत्रका निर्देशकबाट हालै राजीनामा दिएका डा. सिद्धि अर्याल रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीमा आवद्ध भएका छन् । एक सय भन्दा बढी देशमा काम गर्ने क्युइडि ग्रुपको एसिया क्षेत्रका निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आएका उनले मुलुक र जनताको हितका लागि काम गर्न साझा पार्टीमा आवद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर र विश्व स्वास्थ पद्धति विकासमा विद्यावारिधि गरेका ४४ वर्षीय डा. अर्यालले आफूले हालसम्म हासिल गरेको ज्ञान र क्षमता मुलुकको विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिने बेला आएकाले राजनीतिमा लागेको क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा बताए । नेपालको बिग्रँदो स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिर्वतन गर्न आवश्यक ठानेर आफ्ना ज्ञान, सीप र क्षमता खर्चिन राजनीतिमा आएको डा. अर्यालको दाबी छ ।
अन्य पार्टीप्रति जनताको विश्वास गुमेको तर्क गरेका उनले मुलुक र जनताको हितका लागि साझा पार्टीले काम गर्न विश्वास लागेर सो पार्टीमा आफू आवद्ध भएको जानकारी दिए । यद्यपी अन्य पार्टीमा राम्रा नेताहरु रहेको भन्दै उनले काम गर्ने परिपाटी र पद्धति गलत बाटोमा गएको बताए । मुलुक र जनताको हितमा भन्दा कमाउने उद्देश्यले राजनीति गर्ने परिपाटीले मुलुकको प्रगति हुन नसकेको टिप्पणी गरेका उनले आफू कमाउन राजनीतिमा नआएको प्रष्टीकरण दिए । सामान्य परिवारबाट हालसम्मको अवस्थामा आइपुगेको बताएका डा. अर्यालले निम्नस्तरको जनताको भावना बुझेकाले उनीहरुको हितमा काम गर्न आएको बताए ।
राजनीतिमा भएको उपलब्धीलाई अब जनता र मुलुकको विकाश र हितका लागि काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो ज्ञान र सीप जनताको विकासमा खर्चिने फेरि पनि दोहोर्याए । जुनसुकै व्यक्तिले देश बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दिएको टिप्पणीको नम्ररुपमा आलोचना गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रवीन्द्र मिश्रलाई पत्रकारिता गर्न सार्वजनिक रुपमा सुझाव दिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले सबै नागरिकको देश बनाउने भूमिका हुने बताए । १० वर्षदेखि जनताले अनुभव गर्ने गरि विकास हुन नसकेको भन्दै उनले मुलुकको अवस्था देख्दा आँखा रसाउने गरेको जानकारी दिए । अरुका लागि काम गर्ने अवस्था जीवनभरमा तीनपल्ट आउने प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले सोही अवसरलाई सदुपयोग गर्न राजनीतिमा लागेको बताए ।
श्रीलंकामा अवार्ड जित्दा के भने स्वस्तिमालाई ? (भिडियो)
हिसिला यमीको करिश्मामाथि आक्रोश, एसईईमा पास भए पनि राजनीतिमा फेल भइन् (भिडियो)